Cellarman & Cellera divay - Easy Multi Display - signage nomerika
Fred avy any atsimon'i Frantsa dia nividy ny rindrambaiko ho an'ny fitoerany divay.
"Amin'ny Easy Multi Display dia mora kokoa ny mampiroborobo ny vokatrao amin'ny mpanjifako!"
Les Passagers du Vin dia fitoeram-boaloboka misy an'i Fred any atsimon'i Frantsa any Saint-Gély-du-Fesc, akaikin'i Montpellier. Ity efitrano fitobiana divay ity dia miorina tsara eo afovoan-tanàna ary tsy trano fitahirizana divay tsotra fotsiny io satria toeram-pivoriana ho an'ireo namana maniry divay tsara avy any amin'ny lafivalon'i Frantsa aorian'ny andro fiasana.
Mitentina 550 euro eo ho eo ny fikirakirany raha ny tena izy, sahabo ho 200 euro ny vidin'ny monitor, ny vidin'ny «écran» iray Easy Easy Display dia mitentina 149 Euros, ny solo-sainy kely manodidina ny 200 euro ary farany ny tariby HDMI iray eo amin'ny 10 euro eo ho eo raha mampifandray ny solosainany kely mankany amin'ny monitor-ny.
Raha jerena fa misy seranan-tsambo HDMI roa ny solo-sahaniny, dia afaka aseho amin'ny mpanara-maso roa i Fred. Mila mividy monitor hafa fotsiny izy ary manavao ilay kinova "écran" tena izy an'ny Easy Multi Display ho an'ny "standard" iray mba hampisehoana miaraka amin'ny mpanara-maso roa!
Tranonkala Les Passagers du Vin
Tian'i Fred foana ny serivisy tsara indrindra ho an'ireo mpanjifany mitaky be dia be ary nitodika tany amin'ny Easy Multi Display izy hampiroborobo ny tavoahangin-divay tsara indrindra!
Te hanana rindrambaiko tsotra, mahomby ary haingana hapetraka izy. Ka Easy Multi Display no vahaolana mety indrindra satria mahery ny vokatray nefa tena mora apetraka sy ampiasaina. Ora iray taorian'ny nividianany Easy multi Display dia vonona hampiasaina izy ary afaka nahafa-po ny mpanjifany i Fred.
Androany i Fred dia mampiasa am-pireharehana ny Easy Multi Display ao ambadiky ny kaonterany mba hampisehoana sary, horonantsary ary ny toetr'andro mivantana.
Afa-po tamin'ny Easy Multi Display izy izao, te-hividy monitor faharoa izay hampiasaina hanehoana tolotra manokana eo am-baravarankelin'ny fivarotany hisarika ny sain'ny mpandalo.
Ampitomboina amin'ny fomba mahery vaika ny fahitana ireo tavoahanginao divay
Amin'ny Easy Multi Display, azonao atao ny manasongadina haingana ny tavoahanginao tsara indrindra hahitana ny mason'ireo mpanjifanao amin'ny sary, horonan-tsary ary maro hafa!
Tongava mahay amin'ny fampielezan-kevitrao
Tsy terena ianao hangataka serivisy marketing ivelany hamoronana doka. Miaraka amin'ny Easy Multi Display, azonao atao ny mifamadika haingana sy haingana amin'ny fampisehoana iray hafa! Tsy mora velively ny nifehy ny fampielezan-kevitrao!